Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Tetikasa 13 ho an'ny distrika 13 hamonjy ny fizahan-tany Himalaya
Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Tulip Garden any Uttarakhand
Ny fanjakana havoanan'i Uttarakhand, fanjakana iray any avaratr'i India ampitan'ny Himalaya, dia mikasa ny hamolavola tetikasa fizahan-tany 13 ao amin'ireo distrika 13 misy azy.
Ny tanjon'ireto tetikasa ireto dia ny hamindra ny fizahantany amin'ny fandrika ratsy noho ny COVID-19 mankany amin'ny fitsidihan'ny mpitsidika midadasika kokoa.
Ny famatsiam-bola ho an'ireo tetikasa ireo dia tadiavina avy amin'ny governemanta ary koa sampan-draharaha misahana ny fampandrosoana tsy miankina.
Tahaka ny zava-mitranga eran'izao tontolo izao, ny fizahan-tany dia mikatsaka ny hisoroka ny fahamaroan'ny olona ary hanome safidy ho an'ny mpizahatany.
Ny distrika 13 ao Uttarakhand dia Almora, Bageshwar, Chamoli, Champawat, Dehradun, Haridwar, Nainital, Pauri, Pithoragarh, Rudraprayag, Tehri, Udham Singh Ngar, ary Uttarkashi. Zaridaina tulip ao amin'ny distrikan'i Chamoli sy Astro Park no isan'ny tetikasa kendrena.
Tato ho ato ao India, toy ny mitranga any an-kafa, ny fifantohana dia ny fijerena ny fizahan-tany amin'ny fomba fijery mahasalama sy ny fisorohana ny fandrika tamin'ny lasa noho ny COVID-19 sy ny fiovana rehetra ary ny fiatraikany. Uttarakhand dia iray amin'ireo fanjakana farany farany mijery fizahan-tany amin'ny lafiny makro-holistic mba hijanona ho tsara ny fiantraikan'ny fizahan-tany.
Tanjona ny hampielezana ireo tetikasa amin'ny faritra samihafa mba hanalefahana ny tsy fahaizan'ny fizahan-tany. Ny fanaovana sitra-po dia tokony hanampy amin'ny fanesorana ny fifantohan'ny mpizahatany amin'ny toerana efa misy, araka ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny fizahantany.
8 Aogositra 2021 amin'ny 20:07
Tsy ekenay daholo ny hevitra rehetra. Nampiroborobo ny filokana amin'ny Internet ny hevitrao ary tsy nifandray tamin'ny tantara iray.